Ahoana no nanimbako ny laza nataoko tamin'ny haino aman-jery sosialy ... Ary ny zavatra tokony ianaranao avy amin'izany | Martech Zone
Raha efa nahafinaritra ahy ny nihaona taminao manokana, dia matoky aho fa ho hitanao ho olona, ​​vazivazy ary mangoraka aho. Raha tsy mbola nifankahita taminao manokana aho, matahotra aho sao mety ho hevitrao momba ahy aho noho ny fisian'ny media sosialy.
Olona mafana fo aho. Liana amin'ny asako, ny fianakaviako, ny namako, ny finoako ary ny politika aho. Tiako tanteraka ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo lohahevitra ireo… ka rehefa nipoitra ny media sosialy folo taona lasa izay, dia nanararaotra nanolotra sy niady hevitra momba ny fomba fijeriko momba ny lohahevitra rehetra aho. Tena liana te hahafantatra aho Nahoana mino ny zavatra ataony ny olona ary koa manazava ny antony inoako ny zavatra ataoko.
Hafa tanteraka ny fiainako an-trano nihalehibe. Tafiditra ao anatin'izany ny fomba fijery rehetra - fivavahana, politika, fironana ara-nofo, firazanana, harena… sns. Ny raiko dia modely faran'izay tsara ary katolika romana mpivavaka be. Noraisiny ny fotoana ahafahana mamaky mofo amin'ny olona rehetra ka misokatra foana ny tranonay ary velona sy mifanaja hatrany ny resaka. Nihalehibe tao amin'ny trano iray izay nankasitraka ny resaka rehetra aho.
Ny lakilen'ny fanapahana mofo amin'ny olona kosa dia ny fahitanao azy ireo tao amin'ny masony ary fantatr'izy ireo ny fiaraha-miory sy ny fahatakarana izay nentinao teo ambony latabatra. Nianaranao momba ny toerana sy ny fomba nitomboany. Azonao atao ny mahatakatra ny antony ninoany ny zavatra nataony mifototra amin'ny zavatra niainany sy ny toe-javatra nentin'izy ireo tamin'ny resaka.
Tsy nanimba ny lazako ny haino aman-jery sosialy
Raha niaritra ahy ianao nandritra ny folo taona lasa, matoky aho fa nanatri-maso ny fahazotoako hiditra amin'ny media sosialy ianao. Raha mbola eo ianao, dia misaotra anao aho fa mbola eto ianao - satria niditra an-tsokosoko tao amin'ny media sosialy aho tamin'ny voalohany fa faly tamin'ny fahafaha-manangana fifandraisana tsara kokoa sy mahatakatra tsara ny hafa. Dobo marivo, raha tsy hiteny afa-tsy izay.
Ny vintana dia raha nahita ahy niteny tamina hetsika iray ianao, niara-niasa tamiko, na efa naheno momba ahy ary nanampy ahy ho namana tao amin'ny fantsona media sosialy… Nifandray taminao an-tserasera ihany koa aho. Boky misokatra ny fantsona media sosialy - nizara ny momba ny orinasako aho, ny fiainako manokana, ny fianakaviako… ary eny… ny politikako. Izy rehetra miaraka amin'ny fanantenana ny fifandraisana.
Tsy nisy izany.
Raha vao nieritreritra ny hanoratra ity lahatsoratra ity aho dia tena te-hitondra anaram-boninahitra izany Ahoana no nanimban'ny haino aman-jery sosialy ny laza ratsy nataoko, saingy izany dia mety hahatonga ahy ho tra-boina raha toa aho ka mpandray anjara amin'ny faniriako mafy loatra amin'ny fanjakako.
Alao an-tsaina ange ny fandrenesana ny kiakiaka avy any amin'ny efitrano hafa izay ananan'ny mpiara-miasa miady hevitra amin'ny lohahevitra manokana. Miditra amin'ny efitrano ianao, tsy mahatakatra ny sahan-kevitra, tsy mahalala ny fiavian'olona tsirairay, ary mikiakiaka ny hevitrao maneso ianao. Na dia mety mankasitraka azy aza ny olona vitsivitsy, ny ankamaroan'ny mpandinika dia hieritreritra fotsiny fa olon-dratsy ianao.
Izaho no adala. Imbetsaka, hatrany hatrany, hatrany hatrany.
Mba hampifangaroana ny olana, ireo sehatra toa ny Facebook dia vonona ny hanampy ahy amin'ny fahitana ireo efitrano mafy indrindra miaraka amin'ny tohan-kevitra mahery vaika. Ary tsy nahalala ny vokatr'izany aho. Rehefa nanokatra ny fifandraisako tamin'izao tontolo izao, izao tontolo izao dia nahita ny ratsy indrindra tamin'ny fifandraisako tamin'ny hafa.
Raha nanoratra fanavaozana aho (nasiako marika ny #goodpeople) izay nizara tantara momba ny olona iray nahafoy tena sy nanampy olona hafa… hahazo fomba am-polony maro aho. Raha natsipiko tao anaty barbara ny fanavaozana ara-politika an'ny profil iray hafa dia nahazo zato aho. Ny ankabeazan'ny mpihaino Facebook ahy dia nahita ny lafiny iray fotsiny tamiko, ary nahatsiravina izany.
Ary mazava ho azy, ny media sosialy dia faly kokoa nanako ny fihetsika ratsy indrindra nataoko. Antsoin'izy ireo izany andraikitra.
Inona no tsy ananan'ny haino aman-jery sosialy
Ny tsy manana ny haino aman-jery sosialy dia ny sahan-kevitra rehetra. Tsy azoko lazaina aminao foana ny fotoana nanolorako hevitra ary avy hatrany dia nomena anarana mifanohitra amin'izay ninoako aho. Ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy tsirairay izay mampiroborobo ny algorithma ny fanosehana sy ny fisarihana ireo foko misy ny mpijery roa izay manafika. Mampalahelo fa manampy azy fotsiny ny tsy mitonona anarana.
Zava-dehibe ny tontolon'ny tontolon'ny finoana. Misy antony iray mahatonga ny ankizy matetika hitombo miaraka amin'ny finoana mitovy amin'ny ray aman-dreniny. Io dia tsy indoctrination, tena ara-bakiteny fa isan'andro izy ireo dia nahita fanabeazana ary nampiharihary ny finoan'ny olona tiany sy hajain'izy ireo. Io finoana io dia tohanana tanteraka amin'ny alàlan'ny fifandraisana an'arivony na ana hetsiny. Atambaro izany finoana izany miaraka amin'ireo traikefa ananana sy ireo finoana ireo. Midira ao fa zavatra sarotra izany - raha tsy azo atao - ny mihodina.
Tsy miresaka fankahalana no resahiko eto… na izany aza dia azo ianarana amin'ny fomba mampalahelo ihany koa. Zavatra tsotra no tiako resahina… toy ny finoana hery lehibe kokoa, fanabeazana, andraikitry ny governemanta, harena, orinasa, sns. Ny zava-misy dia samy manana ny finoany voasoritra ao amintsika daholo isika, ny traikefa manamafy ireo finoana ireo, ary ny fomba fijerintsika tsy mitovy izao tontolo izao noho izy ireo. Zavatra tokony hajaina izany nefa matetika tsy ao amin'ny media sosialy.
Ohatra iray matetika ampiasako ny asa aman-draharaha satria mpiasa aho hatramin'ny 40 taona teo ho eo. Mandra-pahatongan'ny nanombohako ny orinasako sy ny olona niasako, dia tena tsy fantatro avokoa ny fanamby rehetra amin'ny fanombohana sy fampandehanana orinasa. Tsy azoko ny fitsipika, ny fanampiana voafetra, ny kaonty, ny fanamby amin'ny cashflow ary ny fangatahana hafa. Zavatra tsotra… toy ny hoe matetika ny orinasa dia (tara) tara amin'ny fandoavany ny faktiora.
Noho izany, rehefa mahita olona hafa mbola tsy nampiasa olona nanome ny heviny an-tserasera aho, dia manome ny ahy rehetra! Ny mpiasa iray izay nandeha nitantana ny orinasany manokana dia niantso ahy volana maro taty aoriana ary nilaza hoe: "Tsy fantatro mihitsy!". Ny zava-misy dia mandra-pahatonganao any amin'ny kiraron'olon-kafa, ianao ihany mieritreritra azonao ny toe-javatra misy azy ireo. Ny tena izy dia tsy hahavita mandra-pahatonganao any ianao.
Ahoana no fanamboarako ny laza nataoko amin'ny haino aman-jery sosialy
Raha manaraka ahy ianao dia mbola ho hitanao fa olona nifamofoana sy nifandray tamiko an-tserasera aho fa niova be ny fizarana sy ny fahazarana tato anatin'ny roa taona lasa. Izany no vokatra sarotra ateraky ny fahaverezan'ny namana, ny fikorontanan'ny ankohonana, ary… eny… ny fahaverezan'ny orinasa noho izany aza. Ity ny torohevitra omeko momba ny firosoana:
Tokony ho tena mpankafy ny namana Facebookds
Ireo algorithms ao amin'ny Facebook no ratsy indrindra amin'ny fahitako azy. Nisy fotoana aho, efa ho 7,000 namana amin'ny Facebook. Na dia nahazo aina tamin'ny fifanakalozan-kevitra sy ady hevitra amina lohahevitra maroloko niaraka tamin'ny namako akaiky tao amin'ny Facebook aza aho, dia nampiharihary ny olona farany 7,000 izany. Tena nahatsiravina izany satria nanenika ny isan'ny fanavaozana tsara nozaraiko. Ny Facebook-ko namana nahita tsotra fotsiny ny fanavaozana ny faran'ny ampahany, mahatsiravina ary maneso.
Nanala ny Facebook tamina namana mihoatra ny 1,000 aho ary hanohy hampihena izany habetsaky ny fandrosoana izany. Amin'ny ankabeazany, itondrako ny zava-drehetra ankehitriny toy ny hoe handeha ampahibemaso - na manamarika izany aho na tsia. Nihena be ny fifamofoako tao amin'ny Facebook. Te hahafantatra ihany koa aho fa mahita ny ratsy indrindra amin'ny olon-kafa koa. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
Najanoko ihany ny fampiasana Facebook ho an'ny orinasa. Ny algorithman Facebook dia namboarina ho anao vola mba hiseho ny fanavaozana ny pejinao ary heveriko fa tena ratsy izy io. Nandany taona maro ny orinasa nanangana fanarahana ary avy eo nandrovitra ny Facebook ny Facebook fa nandoa lahatsoratra avy amin'ny mpanaraka azy… very tanteraka ny fampiasam-bolan'izy ireo tamin'ny fitantanana fiaraha-monina. Tsy maninona aho raha afaka mahazo orinasa bebe kokoa amin'ny Facebook, tsy hanandrana aho. Ho fanampin'izay, tsy te handrahona orinasa aho amin'ny fiainako manokana any - izay mora loatra.
Ny orinasa LinkedIn dia ho an'ny orinasa ihany
Mbola misokatra malalaka amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra aho LinkedIn satria ny orinasako sy ny lahatsoratro mifandraika amin'ny orinasako ary ny podcast-ko no zaraiko any. Nahita olona hafa nizara fanavaozana manokana tao aho ary hanome torohevitra hanohitra izany. Tsy hiditra amin'ny efitrano fivoriana ianao ary manomboka mihiakiaka amin'ny olona… aza atao ao amin'ny LinkedIn izany. Efitra fandraisam-bahininao an-tserasera io ary mila mitazona an'io haavon'ny matihanina io ianao.
Instagram no anjarako tsara indrindra
Tsy misy resaka kely na tsy misy, misaotra, ao amin'ny Instagram. Fa kosa, fomba fijery mankany ny fiainako te-hikirakira tsara sy hizara amin'ny hafa aho.
Na dia amin'ny Instagram aza dia mila mitandrina ihany aho. Ny fanangonako bourbon be dia be dia nisy olona nifandray tamiko noho ny fanahiana fa mpisotro toaka aho. Raha nantsoina hoe “Ny fanangonako ny boriboriko” ny Instagram, dia tsara ny andiana boribory nangoniko. Na izany aza, ny pejiko dia… ary ny filazalazana ahy dia fiainana mihoatra ny 50. Vokatr'izany dia be loatra ny sary bourbon, ary mihevitra ny olona ho mamo aho. Oy.
Vokatr'izany dia fanahy iniana aho tamin'ny fanandramako hanova ny sariko Instagram miaraka amin'ny sarin'ny zafikeliko vaovao, ny diako, ny fanandramako mahandro, ary ny topy maso amin'ny fiainako manokana.
Folks… Tsy tena fiainana ny Instagram… Hotehiriziko ho toy izany hatrany izany.
Misaraka ny Twitter
Mizara ampahibemaso amin'ny an'ny Twitter manokana kaonty fa manana matihanina ihany koa aho Martech Zone ary DK New Media zaraiko tsara. Ampahafantariko ny olona indraindray ny fahasamihafana. Ampahafantariko azy ireo izany Martech ZoneNy kaonty Twitter ahy dia mbola… saingy tsy misy ny hevitra.
Ny tiako indrindra momba ny Twitter dia toa mampiseho fahitana mandanjalanja momba ahy ireo algorithms fa tsy ireo siokako mampiady hevitra indrindra. Ary… ny adihevitra ao amin'ny Twitter dia mety hahatonga ilay lisitra nalaza fa tsy tokony handroso foana. Manana ny resaka mahaliana indrindra tao amin'ny Twitter aho… na dia misy adihevitra mafana aza ry zareo. Ary, matetika aho afaka mametaka resaka iray izay mampihetsi-po amin'ny teny tsara fanahy. Toa tsy nisy izany tao amin'ny Facebook.
Twitter dia ho lasa fantsona sarotra hialako ny hevitro… saingy tsapako fa mbola mety handratra ny lazako izany. Ny valinteny iray nesorina tsy ho an'ny tontolon'ny resadresaka manontolo momba ny mombamomba ahy manontolo dia mety hiteny hanimba. Mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fanapahan-kevitra momba izay zaraiko ao amin'ny Twitter noho ny taloha aho. Imbetsaka aho dia tsy tsindrio akory ny famoahana ilay bitsika ary mandroso.
Tsy tokony hanana laza tsara ve ny laza tsara indrindra?
Mandritra izany fotoana izany dia mahatalanjona ahy ireo mpitarika ao amin'ny orinasako izay hajaina tsara izay fifehezana ampy tsy hijoro amin'ny media sosialy mihitsy. Mety hieritreritra ny sasany fa kanosa kely fotsiny… fa heveriko fa matetika dia mila herim-po bebe kokoa ny fanidiana ny vavanao toy izay ny fanokafanao tena amin'ny tsikera sy fanafoanana ny kolontsaina hitantsika fa miha-mandroso amin'ny Internet.
Ny torohevitra tsara indrindra, mampalahelo, dia ny tsy miresaka zavatra mampiady hevitra mety hitranga amin'ny fomba diso na tsy ekena. Arakaraka ny maha-antitra ahy no ahitako ireo olona ireo mampiroborobo ny orinasany, voasa amin'ny latabatra bebe kokoa ary lasa malaza amin'ny orinasany.
Tsotra tsotra fotsiny fa nanalavitra ireo olona mbola tsy nifankahita tamiko manokana aho, tsy nahita ny fangoraham-poko, ary mbola tsy nanantona ny fahalala-tanana ahy. Noho izany, manenina aho tamin'ny zavatra sasany nozaraiko nandritra ny taona maro tao amin'ny media sosialy. Nanatona olona maromaro ihany koa aho ary nifona manokana, nanasa azy ireo hisotro kafe hahafantatra ahy bebe kokoa. Tiako izy ireo hahita ahy amin'ny maha-izy ahy fa tsy ilay sarisary ratsy izay nasehoan'ny mombamomba ny media sosialy azy ireo. Raha iray amin'ireo olona ireo ianao… antsoy aho, Tiako ny manatratra.
Tsy mampalahelo ve raha ny lakilen'ny haino aman-jery sosialy no mety hisorohana ny fampiasana azy tanteraka?
NAOTY: Nohavaoziko ny faniriana hanao firaisana amin'ny lahy sy ny vavy. Ny fanehoan-kevitra dia nanondro ny tsy fahampian'ny fampidirana olona ao.
Tags: douglas karrLazan'ny Facebooklazan'ny instagramlaza malazalaza eo amin'ny Internetlazahaino aman-jery sosialylazan'ny haino aman-jery sosialylazan'ny twitter
accessiBe: Mampiasa ny faharanitan-tsaina artifisialy hifehezana ny fahazoana miditra amin'ny tranokala
22 Mey 2021 tamin'ny 4:47 hariva
“Anisan'izany ny fomba fijery rehetra - ny fivavahana, ny politika, ny filan'ny nofo, ny firazanana, ny harena… sns.”
Ho hita ho toy ny ankehitriny sy fampidirina bebe kokoa ianao raha mampiasa fironana ara-nofo fa tsy aleony. Tsy mifidy ny ho mahitsy na pelaka na zavatra hafa izahay. Ny maha-izy antsika.
23 Feb 2021 tamin'ny 9:46 maraina
Tena teboka tena tsara izany, havaoziko ilay lahatsoratra satria azo antoka fa izany ny fanahin'izy io.
23 Feb 2021 tamin'ny 9:26 maraina
TENA tiako ny nanoratanao an'ity. Mampiseho ianao fa tsy nianatra na inona na inona. Ny teoria tsikombakombao, ny fankahalana ary ny hadalana ankapobeny no olana. Tsy fahavalo ny media sosialy (araka ny nomarihinao) fa olona mankahala fotsiny ianao… tadidio ilay bitsika izay nitenenanao hoe "asio lakaila gorila" momba ny famoahana radioaktifa ao Japana? Tadidiko… 10 andro lasa izay. Manantena ny hitohizan'ny lazanao io làlan-kaleha io.
23 Feb 2021 tamin'ny 9:44 maraina
Zack, misaotra tamin'ny hevitrao. Heveriko fa manohana ny lahatsoratro sy ny fomba fijeriko ny haino aman-jery sosialy izany ary mazava ho azy fa manana fomba fijery mahatsiravina ahy ianao nefa ny mpiara-miasa amiko, ny mpanjifako ary ny namako tsy. Mirary anao ho tsara.
26 Feb 2021 tamin'ny 1:22 maraina
Oay! Doug izay lahatsoratra tsara be dia be feno fahitana momba ireo zavatra tokony ho fantatsika tsirairay bebe kokoa. Saingy toa ny efa voalazanao, ny maha-zava-dehibe ny fanaovana izany rehefa manandrana mandanjalanja ny maha olona anao ary koa mitantana orinasa an-tserasera dia vao mainka sarotra sy mikorontana!
Toa nifanaraka tamin'ity fifandraisana an-tserasera sy ivelan'ny daholobe ity izaho sy ianao taona maro lasa izay, toa izany foana. Kafe maro dia maro any amin'ny kafe sy orinasa maro eny an-dalana. Tsy misy mahatafintohina ny sakaizako hafa tamin'ny andron'ny Circle City, ny anao ao amin'ilay iray izay angamba manenina indrindra aho noho ny halavirany ny jeografia ka tsy afaka mizara kafe, fifanakalozan-kevitra, adihevitra, fihomehezana ary eny, angamba ny bourbon aza amin'ny fomba mahazatra kokoa.
Ity misy anao, ny orinasanay ary ny media sosialy. Enga anie isika ka hanohy hitety ireo rano ireo amin'ny alàlan'ny tenantsika manokana ary hanampy amin'ny fitarihana ny mpanjifanay soa aman-tsara eo amoron'ny morontsiraka koa!
26 Mey 2021 tamin'ny 3:57 hariva
Misaotra! Ary nankasitraka hatrany ny fisakaizanay.